PALAUNG NATIONAL SOCIETY - JAPAN: ဟီရိုရှီးမား အနုမြူနှစ်ပတ်လည်နှင့် ဂျပန့်စိတ်ဓါတ် 68th Anniversary of Bombing of Hiroshima
သမ္မတကို သတိပေးရန် အဲလ်ဘတ်အိုင်စတိုင်းကို တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိုင်စတိုင်းရဲ့သတိပေးမှုကြောင့် အမေရိကန်သမ္မတ ဖရန်ကလင်ရုစဘဲ့ (Franklin Roosevelt) က အနုမြူဗုံး တီထွင်ရန် လျှို့ဝှက် စီမံကိန်းတစ်ခု ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းကို မန်ဟက်တန်စီမံကိန်း (Manhattan Project) လို့ခေါ်ပါတယ်။ မန်ဟက်တန်ပရောဂျက်က မေရိကန်အနောက်တောင်ပိုင်း နယူးမက္ကဆီကို ပြည်နယ် မန်ဟက်တန်ခရိုင်က (Los Alamos) ဆိုတဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အက်ဒွပ်တယ်လာဟာ ၁၉၅၂ အမေရိကန်သမ္မတ ထရူးမင်း (Harry Truman) လက်ထက်မှာ ဟိုက်ဒြိုဂျင်ဗုံးကို တီထွင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက် သူ့ကို “Father of the hydrogen bomb” လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ မန်ဟက်တန် ပရောဂျက်မှာ အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်နဲ့ ကနေဒါ သုံးနိုင်ငံပါဝင်ပါတယ်။ မန်ဟက်တန် ပရောဂျက်ရဲ့ ပထမဆုံး အနုမြူဗုံးစမ်းသပ်မှုကို ၁၆ ဇူလိုင်၊ ၁၉၄၅ မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးမက္ကဆီကိုပြည်နယ်မှာ (Trinity Test) လို့ခေါ်တဲ့အမည်ဝှက် (Code Name) နဲ့ စမ်းသပ်ဖေါက်ခွဲ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံကို အနုမြူဗုံး ဘာကြောင့်ကြဲရသလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းများစွာ ရှိသလို အနုမြုဗုံး သုံးတာ မှန်သလား၊ မှားသလား၊ လူ့ကျင့်ဝတ်အရ လုပ်သင့်သလား၊ မလုပ်သင့်ဘူးလား ဆိုတာတွေ ဒီနေ့အထိငြင်းခုန် နေကြတုန်းပါဘဲ။ အနုမြူဗုံးကြဲရခြင်းမှာ ပထမဆုံး ရိုးရိုးရှင်းရှင်း တစ်ချက်ကတော့ အနုမြူဗုံးက တီထွင်ပြီးပြီ။ စမ်းသပ်ပြီးပြီ။ ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ ထိရောက်မှုနဲ့ အဖျက်စွမ်းအားကို ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်လို စမ်းသပ်မလဲ။ ဒီနေရာမှာ ပစ်မှတ်က ဟီရိုရှီးမားနဲ့ နာဂါစကီကို တွေ့သွားတာပါဘဲ။ ဟီရိုရှီးမားဟာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ သတ္တမ အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီး ဒီမြို့မှာ ရေနံချက်စက်ရုံများ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း စက်ရုံများ၊ လက်နက်တိုက်များနဲ့ စစ်အခြေခံ စခန်းများ ရှိနေတဲ့ အတွက် “စစ်ဖက်ပစ်မှတ်” တစ်ခု အလိုလိုဖြစ်လာ ပါတယ်။ ဒီမြို့ရဲ့လူဦးရေကလဲ (၃၄၃,၀၀၀) ရှိပါတယ်။
ပစ်မှတ် ရွေးချယ်ရာမှာလဲ အကြမ်းအားဖြင့် သုံးပိုင်းရှိပါတယ်။ တစ်ပိုင်းက အရပ်သားအများစုရှိပြီး လူနေထူထပ်၍ ၃မိုင်ပတ်လည်ထက် ပိုကျယ်တဲ့ မြို့ဖြစ်ရမယ်။ နောက်တစ်ချက်က စစ်စခန်းများ၊ စက်ရုံများရှိတဲ့ နေရာလည်းဖြစ်ရမယ်။ နောက်ဆုံး အရေးအကြီးဆုံးတစ်ချက်က ရိုးရိုးစစ်တိုက်တဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတင် မဟုတ်ဘဲ အရပ်သားတွေအများကြီး သေစေတဲ့အတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါ (Psychological effect) ၀င်သွားအောင် လုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအများကြီး သေစေဘို့ ကျန်တဲ့ဂျပန်မြို့ကြီးတွေကို စိစိညက်ညက် ကြေအောင် ဗုံးကြဲနေပေမဲ့ ပစ်မှတ်ထားတဲ့ မြို့တွေကို ဗုံးမကြဲဘဲထားခဲ့ ပါတယ်။ ဒါမှ ဗုံးဒဏ် မခံရတဲ့ မြို့များကို အရပ်သားများ စုပြုံဝင်ရောက် လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့မှာ ဟီရိုရှီးမားကို ကြဲတဲ့ဗုံးက Little Boy လို့ခေါ်ပြီး ယူရေနီယံဗုံး ဖြစ်ပါတယ်။ နာဂါစကီကို ကြဲတဲ့ဗုံးက ပလူတိုနီယံ ဗုံးဖြစ်ပြီး ပိုကြီးတဲ့အတွက် Fat Man လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဟီရိုရှီးမားကို အီနိုလာဂေး (Enola Gay) လို့ ခေါ်တဲ့ ဘီ-၂၉ ဗုံးကြဲ လေယာဉ်ကြီးနဲ့ ကြဲခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုမှာ အပူချိန်က ၇၀၀၀ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် ရှိပြီး မှိုပွင့်ပုံစံ တိမ်တိုက်ကြီးက နာရီပေါင်းများစွာ ကျန်ရှိ နေခဲ့ပါတယ်။ အနုမြူဗုံး ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အယ်လ်ဖာ၊ ဘီတာ၊ ဂမ်မာလို့ခေါ်တဲ့ ရောင်ခြည်တွေ ဖြာထွက်ပြီး ဒီရောင်ခြည်တွေက လူတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဖေါက်ဝင်ပြီး ချက်ခြင်း သေကြသလို၊ နောက်ပိုင်းမှာလည်း သွေးကင်ဆာ၊ ရိုးရိုးကင်ဆာတို့ဖြစ်ပြီး တဖြည်းဖြည်း သေကုန်ကြပါတယ်။ အနုမြူ ရောင်ခြည်သင့်ပြီး မသေဘဲကျန်ခဲ့တဲ့ လူတွေက မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ နောက်မျိုးဆက် ကလေးများဟာလဲ ကင်ဆာ ရောဂါများ ခံကြရသလို အချို့မှာ နားရွက်၊ ပါးစပ်ပေါက်မပါခြင်း၊ မျက်လုံးက ဦးခေါင်း နောက်ပါလာခြင်းစတဲ့ မျိုးဗီဇ ချို့ယွင်းမှုများပါ ခံစားခဲ့ကြရပါတယ်။ ၁၉၄၅ စာရင်းအရဆိုရင် ဟီရိုရှီးမားမှာ လူပေါင်း တစ်သိန်းလေးသောင်း (၁၄၀,၀၀၀) လောက်သေပြီး၊ နာဂါစကီမှာ ရှစ်သောင်း (၈၀,၀၀၀) လောက် သေပါတယ်။
ဟီရိုရှီးမား အနုမြူဗုံးချခံရပုံကို သတင်းသမား တစ်ဦးက ဒီလိုဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ “ရုတ်တရက် စူးကနဲ အဖြူရောင်လိုလို၊ ပန်းရောင်လိုလို အလင်းကြီး ကောင်းကင်မှပေါ်လာပြီး တွေ့ထိသူ မှန်သမျှ အသက်ရှူ ကြပ်၍သော်လည်းကောင်း၊ လောင်ကျွမ်း၍ သော်လည်းကောင်း၊ သေစေနိုင်သည့် ပြင်းထန်သော အပူကြီးနှင့် လေထုကြီးသည် သူဆင်းချလာရာ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး သိမ်းကြုံး ရှင်းလင်းပစ်လိုက်လေသည်။ စက္ကန့် အနည်းငယ်အတွင်းမှာပင် ဟီရိုရှီးမားမြို့လည်ခေါင်လမ်းများပေါ်ရှိ ထောင်ချီနေသော လူများမှာ ယင်းအပူ ဓါတ်ကြီးဖြင့် တောက်လောင်၍ မီသွေးတုံးအတိ ဖြစ်ကုန်တော့၏။ အချို့ တော်တော်များများမှာမူ မီးလောင် ကျွမ်းရင်း လူးလှိမ့်အော်ဟစ်လျက် ရှိနေကြ၏။ ၄င်းနောက်မှ ပေါက်ကွဲသံကြီးပေါ်လာပြီး ယင်းပေါက်ကွဲမှုနှင့်အတူ နံရံများ၊ အိမ်များ၊ စက်ရုံများနှင့်အခြား အဆောက်အဦများ အားလုံးပျောက်သွားကြ၏။ ဟီရိုရှီးမားကား လုံးဝရှိတော့မည်ဟုတ်ချေ။ ပထမဆုံး အနုမြူဗုံးသည် သူ့လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်လိုက် လေပြီ”။
အနုမြူဗုံး သတင်းကြောင့် အိုင်စတိုင်း ကိုယ်တိုင်ကပင် “သူအရင်တုန်းက ဆွစ်ဇာလန်မှာ နာရီပြင်တဲ့ အလုပ် လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်၊ ဒီလိုသာ အနုမြူဗုံးက လူတွေအများကြီး သေမယ်မှန်းသိရင် E=MC2 ဆိုတဲ့ ဖေါ်မြူလာကို မထွင်ခဲ့ဘူး၊ နာရီဘဲ လုပ်စားနေပါတယ်” လို့ပြောပါတယ်။ အီနိုလာဂေးကိုမောင်းတဲ့ ကပ္ပတိန်ပိုင်းလော့ (Colonel Paul Tibbets) ကိုယ်တိုင်လည်း သူဗုံးချပြီး မှိုပွင့်ကြီးတက်လာတော့ မောင်းပြေးရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ စိတ်တော်တော် ထိခိုက်သွား ပါတယ်။
အနုမြူဗုံးကြဲဘို့အတွက် ပစ်မှတ်ကိုရွေးရာမှာလဲ အငြင်းပွားစရာများ ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဂျာမဏီကို မရွေးဘဲ ဂျပန်ကိုရွေးတာလဲ။ ဂျပန်ဟာ အာရှတိုက်သားမို့လို့ ရွေးတာလား။ အမေရိကန်တို့ရဲ့ပုလဲ ဆိပ်ကမ်းကို ဂျပန်က အလစ် ၀င်တိုက်တဲ့အတွက် လက်စားချေဘို့လား စသည်ဖြင့် မေးခွန်းများ ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဂျာမဏီကို မရွေးရတဲ့ အကြောင်းမှာ ဂျာမဏီဟာ ၇ မေ၊ ၁၉၄၅ မှာ မဟာမိတ်တို့ထံ ချွင်းချက်မရှိ လက်နက်ချ ခြင်းဖြင့် မေလ ၈ ရက်နေ့ကစပြီး ဥရောပမှာ စစ်မီးငြိမ်းသွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး မန်ဟက်တန် ပရောဂျက်ရဲ့ ပထမဆုံး အနုမြူဗုံးစမ်းသပ်မှုကလည်း ဂျာမဏီလက်နက်ချပြီး ၁၆ ဇူလိုင်၊ ၁၉၄၅ မှာမှ စမ်းသပ် ဖေါက်ခွဲအောင်မြင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အနုမြူဗုံး စမ်းသပ်ဖေါက်ခွဲပြီး နောက်တစ်နေ့ ၁၇ ဇူလိုင်၊ ၁၉၄၅ မှာ ဂျာမဏီနိုင်ငံ ပို့စ်ဒမ်မြို့မှာ ပို့စ်ဒမ် ကွန်ဖရင့် (Potsdom Conference) ကျင်းပပြီး ကြီးသုံးကြီး ဖြစ်တဲ့ အမေရိကန်သမ္မတ ထရူးမင်း (Harry S. Truman)၊ ဆိုဗီယက် သမ္မတ စတာလင် (Joseph Stalin) နဲ့ အင်္ဂလိပ် ၀န်ကြီးချုပ် ၀င်စတန်ချာချီ (Winston Churchill) တို့တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ ၂၅ ဇူလိုင်မှာ ချာချီ ရွေးကောက်ပွဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့လို့ လေဘာပါတီက ၀န်ကြီးချုပ် အက်တလီက ပို့စ်ဒမ်ကွန်ဖရင့်ကို ဆက်ပြီး တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပို့စ်ဒမ်ကွန်ဖရင့်ရဲ့ အရေးပါတဲ့ အချက်ကတော့ ကမ္ဘာကျော် အနုမြူဗုံး ကိစ္စဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အနုမြူဗုံးက မသုံးလို့မဖြစ်၊ ဂျပန်တွေက ဆာမူရိုင်း မျိုးနွယ်ကလာတဲ့ စစ်ရူးတွေဖြစ်လို့ ဒီလောက်ခေါင်းမာပြီး သတ္တိပြောင်လှတဲ့ ဂျပန်စစ်သားတွေကို ဒူးထောက် လာအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ တစ်ခုတည်းသော ကြောက်စရာ အကောင်းဆုံးလက်နက်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ပို့စ်ဒမ်ကွန်ဖရင့်ဟာ ကမ္ဘာကြီး တစ်ခုလုံးကို စတာလင်၊ ထရူးမင်းနဲ့ ချာချီဆိုတဲ့ လူသုံးဦးလက်ထဲ ထဲ့လိုက်သလိုပါဘဲ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြိုကာလတွေမှာ ဂျာမဏီမှာ နာဇီဝါဒ၊ အီတလီမှာ ဖက်ဆစ်ဝါဒတွေ ထွန်းကား အောင်ပွဲခံခဲ့သလို ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဖက်ဆစ်ဝါဒကို အားကောင်းစေခဲ့တဲ့ စစ်ဝါဒ (Militarism) ဟာလဲ အဲဒီကာလ တွေမှာထွန်းကားပြီး အခြေခိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်ရဲ့ စစ်ဝါဒကို ကျင့်သုံးတဲ့ စစ်ဝါဒီ (Militarists) တွေဟာလဲ သူတို့ရဲ့ ဆာမူရိုင်း စစ်သူရဲကောင်း မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာတဲ့ ဘူရှိဒိုစိတ်ဓါတ်၊ ဆာမူရိုင်း စိတ်ဓါတ်တွေကို အခြေခံ လာတဲ့အတွက် စစ်ပွဲတစ်ခုရဲ့အောင်နိုင်ခြင်းနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခြင်းမှာ၊ ရှုံးနိမ့်ခြင်း လက်နက်ချခြင်း၊ စစ်သုံ့ပန်းအဖြစ် ဖမ်းဆီးခံရခြင်းများကို လုံးဝ လက်မခံနိုင်တာကို တွေ့ရ ပါတယ်။
ဘူရှိဒိုစိတ်ဓါတ် (Bushido Spirit)
ဘူရှိဒိုမှာ 'Bushi' ဆိုတာ စစ်သည် 'warrior' ဖြစ်ပြီး Do ဆိုတာကတော့ 'Way' ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Bushido ဆိုတာ 'The way of the warrior' (သို့မဟုတ်) 'The way of the Samurai life' ဖြစ်ပါတယ်။ ဘူရှိဒို စိတ်ဓါတ်မှာ တာဝန်ယူစိတ် အပြည့်ပါသွားတွေ့ရပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ချင်း တူရင်တောင် ဆာမူရိုင်းရုပ်ရှင်နဲ့ တစ်ခြား အတိုက်အခိုက် ရုပ်ရှင်တွေ မတူကြပါဘူး။ တစ်ခြားကားတွေမှာ သေနတ်ချင်း၊ ဓါးချင်းယှဉ်လို့ ရန်သူ ရှုံးသွားရင် ရှုံးသွားတဲ့ရန်သူကို မသတ်ဘဲထားပြီး မသွားလိုက်နဲ့၊ နောက်က လက်နက်ပုံးနဲ့ လှမ်းပစ်တာတို့ ဘေးမှာကျနေတဲ့ လက်နက်နဲ့ ယူပစ်တာတို့နဲ့ ရှုံးသူကနိုင်သူကို ပြန်ပြီး အနိုင်ယူတတ်ကြပါတယ်။ ဆာမူရိုင်းက ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ ဓါးချင်းယှဉ်ခုတ်လို့ တစ်ဖက် ရန်သူသွေးထွက်သံယို မဖြစ်ဘဲ ဆောင်ဓါး လွတ်ကျသွားရင်တောင် နိုင်သူက ရှုံးသူကို ဘာမှ မလုပ်ဘဲထွက်သွား တတ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရှုံးသူက ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် အရှက်ကို အသက်နဲ့လဲပြီး ကိုယ့်ဗိုက်ကို ခွဲပြီးသတ်သေတဲ့ ဟာရာခိရိ လုပ်ရပါတယ်။
ဟာရာခိရိ ဆိုတာကတော့ (Harakiri= Cutting the belly) မိမိဝမ်းဗိုက်ကို ဓါးဖြင့် ထိုးခွဲ၍ သတ်သေ ခြင်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်တွေဟာ ဆာမူရိုင်း စစ်သူရဲကောင်းမျိုးနွယ်မှ ဆင်းသက်လာတဲ့ စစ်ဝါဒီ (Militarists) များဖြစ်ကြပါတယ်။ ဆာမူရိုင်းစိတ်ဓါတ် (Samurai Spirit) မှာ လက်နက်ချ (သို့) ရှုံးနိမ့်သူ ဆာမူရိုင်း တစ်ဦးအတွက် ဂုဏ်သိက္ခာမရှိတော့၍ သူ့အသက်မှာလည်းတန်ဘိုးမရှိတော့ပေ။ ဒီအခါမှာ ရှုံးသူက ဟာရာခိရိ လုပ်၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေရပါတယ်။ ဆာမူရိုင်း တစ်ဦးတွင် ဆောင်ဓါး ဓါးရှည်တစ်လက် (သို့) နှစ်လက်အပြင် ဓါးတိုတစ်လက်ကို အမြဲဆောင်တတ်ပါတယ်။ ဓါးရှည်က ရန်သူကို တိုက်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ ဓါးတိုက အရေးပေါ်သုံးရန် အပြင် ရှုံးနိမ့်ပါက ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေရန် (ဟာရာခိရိ) ဖြစ်ပါတယ်။
ခါမီခါဇေ (ကာမီကာဇေ) Kamikaze
ခါမီခါဇေ ဆိုတာကတော့ ဘုရားလေ (God Wind or Divine Wind) ဖြစ်ပါတယ်။ မဟာမိတ် စစ်သင်္ဘောများ အကြောက်ရဆုံးမှာ ဂျပန်တို့ရဲ့ ခါမီခါဇေ ခေါ် လေယဉ်တစ်စီးလုံး ဗုံးအပြည့်တင်ပြီး မဟာမိတ် စစ်သင်္ဘောများအပေါ်ကို ထိုးဆင်းပြီး အသေခံ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၄င်းတို့ကို Suicide Bomber (သို့မဟုတ်) Zero Pilot လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။ ၁၉၄၅ မှာ ဂျပန် လေတပ်မှ ပိုင်းလော့ လူရွယ်များ ပေါင်းစည်း လိုက်တဲ့ ကာမီကာဇေ ခေါ် အသေခံတပ်များဟာ အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိသျှ စစ်သင်္ဘောများပေါ်ကို ဗုံးအပြည့် တင်ထားတဲ့ မိမိတို့ရဲ့လေယာဉ်များကို ထိုးစိုက်မောင်းချပြီး အသေခံ ဖျက်ဆီး ခဲ့ကြပါတယ်။ မဟာမိတ် စစ်သင်္ဘော ကြီးများမှာ လူ ၅၀၀ မှ ၁၀၀၀ အထိပါဝင်တဲ့ အတွက် အခုလို တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့် လေယဉ်တစ်စီး လူတစ်ဦးရဲ့ အသက်နဲ့ လူရာနှင့်ချီ၍ လဲတဲ့အတွက် အင်မတန် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ မိမိသင်္ဘော ပေါ်ကိုထိုးဆင်းလာတဲ့လေယဉ်ကို စက်သေနတ် အမြောက်များဖြင့်ပစ်၍ လေယဉ်မှူးသေပြီး လေယာဉ်ပျက်ကျ သွားပါစေ ဒီလေယာဉ်ဟာ ဗုံးအပြည့်နဲ့ သင်္ဘောပေါ်သို့သာ တဲ့တဲ့ကျ ပေါက်ကွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကာမီကာဇေ လေယာဉ်များကို မဟာမိတ်တို့ ဒူးတုန်အောင် ကြောက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဂျပန်တို့ဟာ ကာမီကာဇေ လေယာဉ်များကို အခေါက်ပေါင်း (၁၃၀၀) စေလွှတ်ခဲ့ပြီး မဟာမိတ် စစ်သင်္ဘော (၄၇) စင်းကို နှစ်မြှုပ်ပစ်ကာ (၃၀၀) ခန့်ကို ဖျက်ဆီး နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းမှာ နာဇီဂျာမန်တို့ ကလည်း (Leonids Squadron) လို့ခေါ်တဲ့ အသေခံ ဗုံးခွဲအဖွဲ့ (Suicide Aircraft Pilot) အဖွဲ့များကို ဖွဲ့ခဲ့ပေမဲ့လဲ ဂျာမန် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ကိုယ်တိုင်က မလိုလားလို့ မသုံးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
တောတွင်း တိုက်ပွဲများမှာ ဂျပန်ကို ဘယ်သူမှမမှီ (The Invincible Jap)
အရှေ့တောင်အာရှရှိ မဟာမိတ် တပ်ပေါင်းစုရဲ့ သေနာပတိ မောင့်ဘက်တန်က ဂျပန်စစ်သားတွေကို ဒီလို မှတ်ချက်ချပါတယ်။ “ဂျပန်စစ်သားများဟာ သိပ်အကြမ်းခံနိုင်၊ ခရီးကြမ်း၊ ခရီးဝေးသွားနိုင်၊ ၀န်လေးများ သယ်နိုင်ပြီး၊ ဗြိတိသျှ စစ်သားတစ်ယောက် ရာရှင် မကောင်းဘူးလို့ ညည်းတတ်တဲ့ ရာရှင် အမျိုးအစားမျိုးနဲ့ ရောင့်ရဲ နိုင်တယ်။ နောက်သူတို့ကို ကျုပ်(မောင့်ဘက်တန်) အထင်အကြီးဆုံး ကိစ္စက ဘယ်တော့မှ လက်မြှောက်အရှုံး မပေးဘူး။ တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီဆိုရင်လဲ ဂျပန်နဲ့တိုက်လို့များ ဘယ်တော့မှပြီးပြီလို့ စိတ်ချလို့မရဘူး၊ အကျအဆုံး ဘယ်လောက်အတုံးအရုံး ဖြစ်နေပစေ ထပ်ပြန်တလဲလဲ တိုက်တာဘဲ။ ဂျပန်တွေဟာ ခံစစ်ပြိုပြီဆိုရင်လဲ နောက်ဆုံး တစ်ယောက်ကျန်သည်အထိ ကျန်တစ်ယောက်ကတောင် ခံတိုက်တယ်။ နို့မို့ဘယ်တော့မှ လွယ်လွယ်နဲ့ လက်နက်ချလေ့မရှိဘူး” လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန် စစ်ဥပဒေအရဆိုရင် ဂျပန်စစ်သားတစ်ယောက်ဟာ လက်နက်ချလိုက်လို့ မိမိဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးနွမ်း သွားသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သူ့အသက်မှာ လုံးဝတန်ဘိုးမရှိတော့ပေ။ ထိုသဘောတရားအတိုင်း မဟာမိတ် စစ်အကျဉ်းသားများကို အသက်ရှင်လျက်ထားရန် ဂျပန်တို့ အလွန်တုံ့ဆိုင်း နေကြပါတယ်။ ဂျပန်တို့သိမ်းမိသော နေရာတိုင်းရှိ အကျဉ်းစခန်းများမှာ အခြေအနေ အလွန်ဆိုးရွားနေကြောင်းနဲ့ အချို့နေရာများမှာ ကြောက်မက်ဖွယ် အခြေအနေများပင် ရှိကြောင်း လေဒီမောင့်ဘက်တန်က ကမ္ဘာ့ကြက်ခြေနီနှင့် စိန်ဂျွန်းဌာနချုပ်သို့ အစီရင် ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဟာ အခုပြီးစီးမဲ့ ရက်ထက်နောက်ထပ်ရက်သတ္တ (၃) ပတ်လောက် နောက်ကျပြီး ပြီးမယ်ဆိုရင် အသက်ရှင်ကျန်သူ တစ်ယောက်မှ ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။
၁၉၄၅ ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ အိုဝိုဂျီမားကျွန်းကို အမေရိကန်တပ်များ ၀င်ရောက် တိုက်ခိုက်ရာမှာ လေကြောင်း က ဗုံးတန်ချိန် (၆၈၀၀) ကြဲယူရပြီး၊ ရေကြောင်းသင်္ဘောများရှိ အမြှောက်ကြီးများက အမြှောက်ဆန်ပေါင်း (၂၂၀၀၀) ပစ်ယူခဲ့ရပါတယ်။ သို့တိုင်အောင် အိုင်ဝိုဂျီးမားကျွန်းကို သိမ်းပိုက်ရာမှာ အမေရိကန်တုိ့ရဲ့ကမ်းတက် ကြည်းတပ်သား သုံးပုံတစ်ပုံ ကျဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဂျပန်တို့ဘက်ကလဲ ဂျပန်စစ်သား စုစုပေါင်း နှစ်သောင်း (၂၀၀၀၀) မှာ (၂၁၆) ယောက်သာ အသက်ရှင်လျက် အကျဉ်းသားအဖြစ်ရခဲ့ပါတယ်။ ပစိဖိတ်ဒေသရဲ့ အဆိုးရွားဆုံး တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ပွဲ စတုတ္ထမြောက်နေ့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၂၃)ရက်နေ့မှာ မရိမ်းတပ်သားများက အိုင်ဝိုဂျီးမားကျွန်းရဲ့အမြင့်ဆုံး တောင်ထိပ်ဖြစ်တဲ့ ဆူရီဘာချီတောင်ကို သိမ်းပိုက်ပြီး ၄င်းတောင်ထိပ်မှာ အမေရိကန်အလံကိုစိုက်ထူခဲ့ပါတယ်။ ဒီအလံစိုက်ထူပုံကို Associated Press (AP) အေပီ သတင်းဌာနက ဓါတ်ပုံဆရာ ဂျိုးရိုဆင်တဲလ် (Joe Rosenthal) က သမိုင်း ၀င်ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံကို ရိုက်ခဲ့ရာမှာ ဒီဓါတ်ပုံဟာ ၁၉၄၅ ခုနှစ်မှာ ပူလစ်ဇာဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။
မဟာမိတ်တပ်တွေဟာ အိုကီနာဝါကျွန်းကိုရဘို့ ၁၉၄၅ ဧပြီလမှ ဇွန်လ အထိ(၈၂)ရက် ကြာတိုက်ယူ ရပါတယ်။ အမေရိကန် တပ်သားပေါင်း ငါးသောင်း (၅၀၀၀၀) ကျပြီး၊ ဂျပန်ကတော့ တစ်သိန်းတိတိ ကျပါတယ်။ ဂျပန်တွေ ဘယ်လိုကျသလဲဆိုတော့ သူတို့က လုံးဝလက်နက် မချကြပါဘူး။ ကိုယ့်ဗိုက်အောက်ကိုယ် ဗုံးထဲ့ခွဲတဲ့လူနဲ့၊ ဗိုလ်ချုပ်တွေကတော့ ကိုယ့်ဗိုက်ကိုခွဲပြီး ဟာရာခိရိ လုပ်ကြတယ်။ ဒီတော့ ဂျပန်တွေဟာ သူတို့နိုင်ငံ အပြင်ဘက်က ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းဖြစ်တဲ့ အိုကီနာဝါကိုတောင် ဒီလောက်ခုခံနေရင် သူတို့တကယ် အခြေချနေထိုင်တဲ့ ကျွန်းမကြီး တွေကို ၀င်တိုက်ရင် ဘယ်လိုဖြစ်မယ်တောင် မခန့်မှန်းနိုင်ပါဘူး။ ဟီရိုရှီးမားမှာထက် အိုကီနာဝါမှာသေတဲ့ ဂျပန် လူမျိုးတွေက ပိုများနေပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အိုကီနာဝါအဖြစ်မျိုး နောက်ထပ်ဘယ်လောက်လိုချင်ပါသလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ မဟာမိတ်တို့ စဉ်းစားရပါပြီ။ အဖြေက အိုကီနာဝါ အဖြစ်မျိုးမလိုလားတာနဲ့ အနုမြူဗုံးကို စဉ်းစားတဲ့ အဖြစ်မျိုး ရောက်ခဲ့ရတာပါဘဲ။ တနည်းအားဖြင့် ဒီလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ စစ်ကြီးကို မြန်နိုင်သမျှမြန်မြန် အဆုံးသတ်မဲ့နည်းကို ရှာခြင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါနဲ့တောင် မသေခြာသေးလို့ ဂျပန်တွေ စစ်ပြေငြိမ်းမဲ့ အခြေအနေ မရောက်ရောက်အောင် နောက် (၃) ရက်အကြာမှာ နာဂါစကီကို ဒုတိယ အနုမြူဗုံး ကြဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သြဂုတ်လ (၉) ရက်နေ့မှာ နာဂါစကီကို ဒုတိယအနုမြူဗုံးချအပြီး၊ ၁၄ သြဂုတ်၊ ၁၉၄၅ မှာတော့ ဂျပန်နိုင်ငံက ချွင်းချက်မရှိ လက်နက်ချခြင်း တင်ပြလာပါတယ်။ ဂျပန်ဧကရာဇ် ကိုယ်တိုင်က သူ့ပြည်သူများကို မိန့်ခွန်ုးပြောကြားရမှာ-“ဒါဟာ ဒို့နောင်လာနောက်သားတွေရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ခေတ်အတွက် သည်းညည်းမခံနိုင် တာတွေအားလုံးကို `သည်းညည်းခံခြင်း´ နဲ့အစားထိုးပြီး ဆောင်ရွက်လိုက်တာ ဖြစ်တယ်” လို့ ကြေညာခဲ့ ပါတယ်။ ဂျပန်လက်နက်ချ အခမ်းအနားကို တိုကျိုပင်လယ်ကွေ့ရှိ အမေရိကန် စစ်သင်္ဘောကြီး မစ်ဆူရီပေါ်မှာ ၂ စက်တင်ဘာ၊ ၁၉၄၅၊ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မက်အာသာက မဟာမိတ်တပ်များ ကိုယ်စား ဂျပန်လက်နက် ချတာကို ခံယူခဲ့ပါတယ်။
ဟီရိုရှီးမားနဲ့ နာဂါစကီကို ကြဲခဲ့တဲ့ဗုံးတွေဟာ အင်မတန် ကြောက်စရာကောင်းပြီး အဖျက်စွမ်းအား ကြီးမားတဲ့ ဗုံးတွေဆိုတာထက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို နက်ရှိုင်းစွာ ထိခိုက်စေတဲ့ လက်နက် (Psychological Weapon) များဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်ကို လက်နက်ချစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး အနုမြူဗုံးကြဲခြင်းဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံအဖို့ လူ့ကျင့်ဝတ်အရ တရားမျှတမှု ရှိသလား၊ မရှိဘူးလားဆိုတာကို ပညာရှင်များကြားမှာ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ ဆွေးနွေး ငြင်းခုံစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဗုံးကြဲခြင်းကို ထောက်ခံသူများကတော့ ဒီလိုဗုံးကြဲလို့ ဂျပန်လက်နက် ချလိုက်တာကြာင့် ဂျပန်နိုင်ငံထဲ ၀င်တိုက်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ နှစ်ဖက်လုံး အလွန်ကြီးမားများပြားတဲ့ သေကြေ ပျက်စီးမှုများကို ရှောင်လွှဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံထဲအထိဝင်တိုက်ရင် ဘယ်လောက် အထိသေကြေ ပျက်စီးမလဲဆိုတာကို အိုကီနာဝါကျွန်းတိုက်ပွဲက သက်သေပြနေပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ၁ သြဂုတ်၊ ၁၉၄၄ မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်စစ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမိန့်မှာ မဟာမိတ် စစ်သုံ့ပန်းများ (Prisoners of War-POW) ကိုသုတ်သင်ပစ်ဘို့ အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဟီရိုရှီးမားကို ဗုံးကြဲပြီးပြီးခြင်း ဂျပန်စစ်ဝန်ကြီးရဲ့ပြောဆို ချက်မှာ လက်နက်ချဘို့ကို ကန့်ကွက်တဲ့အပြင် အမေရိကန်တို့မှာ ဒီဗုံးတစ်လုံးဘဲရှိပြီး နောက်ထပ်ကြဲစရာ မရှိတော့ ကြောင်းပြောပါတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်ဝါဒီ စစ်ဝန်ကြီးရဲ့သဘောထား တင်းမာမှု၊ အမြင်မကျယ်မှုတွေကြောင့် ဗုံးတစ်လုံးနဲ့လက်နက်ချမဲ့ အရိပ်အရောင် မတွေ့ရလို့ နောက် (၃) ရက်အကြာမှာ နာဂါစကီကို ချလိုက်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် စစ်ဝန်ကြီးအနေနဲ့ ဗုံး (၂) လုံးချတာတောင် (၂) လုံးထက် မပိုနိုင်ပါဘူးဆိုပြီး လက်နက်မချဘဲ တင်းခံ နေရင်တော့ တတိယမြောက်အလုံးဟာ တတိယမြို့ပေါ်ကို ကျနိုင်မလားဆိုတာ သမိုင်းကြောင်းမှာ ထိပ်တန်း လျှိ့ဝှက်ချက်ဖြစ်လို့ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သမိုင်းကြောင်းဆိုတာ ဖျောက်ဖျက်လို့မရသလို အတိတ် သမိုင်းကြောင်းကို သိသင့်၊ သင်ခန်းယူသင့်တယ်ဆိုတာကို အထက်ပါ ဟီရိုရှီမားအဖြစ်အပျက်က သက်သေပြနေ ပါတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလ အာရှစစ်မျက်နှာမှ မဟာမိတ်စစ်ဦးစီးချုပ်များ
၁. ဗဟိုပစိဖိတ်အလယ်ပိုင်းဒေသရှိဂျပန်ရေတပ်ကိုအဓိကတိုက်သည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနီမစ်(Admiral Nimitz)
၂. သြတြေးလျတိုက်မှာ အခြေစိုက်ထားသော အနောက်တောင်ပစိဖိတ်ဒေသကို တာဝန်ယူရသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မက်အာသာ (General Mac Arthur)
၃. အိန္ဒိယမှာ အခြေစိုက်၍ အရှေ့တောင်အာရှဒေသကို တာဝန်ယူရသော မောင့်ဘက်တန် (Lord Mount batten), (Admiral of the Fleet the Earl of Mount batten of Burma)
၄. တရုပ်ပြည်မကြီးကိုတာဝန်ယူရသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လက်စီဖို ချန်ကေရှိတ် (General Lissimo Chiang Kai Shek)
ရေးသားသူ - ကိုဇင်
USIS, American Mosaic, 2003 Series,
Posted by PNSjapan at 6:48 PM